उद्योग व्यवसायीका हकहितका लागि लड्ने छु–यदुुनाथ – Todaypokhara
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको भदौ ३१ र असोज १ गते सम्पन्न हुने ३१ औं महाधिवेशनमा यदुनाथ अधिकारी सदस्य पदका लागि चुनाव प्रचार अभियानमा हुुनुहुन्छ । मतदाताको मन जित्न घरदैलो अभियानमा रहेका यदुनाथसँग पोखराप्लस अनलाईन पत्रिकाले गरेको छोटो कुराकानी :
घरदैलोमा जाँदा मतदाताको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ ?
चुनावी अभियानको क्रममा मतदाताकहाँ भोट माग्ना जाँदा निकै उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाएको छु । सबैले भोट दिनेमा म निश्चित छु । मेरो व्यवसायीक हिसाबले लामोसमयदेखिको पनि अनुभव छ । उद्योगी व्यवसायीले अवश्य मलाई साथ दिनेछन् ।
संघमा राजनीतिले प्रवेश पायो भनिन्छ, तपाईको धारणा के छ ?
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ विशुद्ध व्यवसायीहरुको हकहितको लागि लड्ने संस्था हो । राजनीति गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।
सदस्य पदमा व्यवसायीले तपाईलाई किन जिताउने ?
किनकि म व्यवसायिक हिसाबले विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध छु । व्यवसायमा लागि रहँदा थुप्रै साना ठूला उद्योग व्यवसायीसँग मेरो चिनाजानी छ । मन जितेर विभिन्न सामाजिक संघ संस्थामा काम गरेको छु । मैले जितेपछि म आफ्नो टीमवर्कलाई मजबूत बनाउने छु । र उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या र समाधानका उपायहरु खोजेर समस्याको हल गर्ने पक्षमा छु ।
व्यवसायिक संस्थामा देखिएका बेथितिको अन्त्य गर्नेछु । उद्योग संचालनका लागि सीपमूलक तालिम तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्नेछु ।